ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါနှင့် ပတ်သက်၍ လူတိုင်း မဖြစ်မနေသိထားသင့်သည့် အချက်များ – Healthy Life Journal
ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါနှင့် ပတ်သက်၍ လူတိုင်း မဖြစ်မနေသိထားသင့်သည့် အချက်များ
ဆီးချိုနှင့်အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး ပြောကြားသည်။
မေး. ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူတိုင်း မဖြစ်မနေသိထားသင့်တဲ့ အချက်တွေကို ပြောပြပေးပါ ဆရာ။
ဖြေ. ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူတိုင်း မဖြစ်မနေသိထားသင့်တဲ့ အချက်သုံးချက်က ဒီရောဂါဟာ-
(၁) ဆင်းရဲချမ်းသာမရွေး ဖြစ်တယ်၊
(၂) အသက်ကြီးငယ်မရွေး ဖြစ်တယ်၊
(၃) တောရော မြို့ပါမကျန် အကုန်ဖြစ်နေပါတယ် ဆိုတာပါပဲ။
ဆရာကြီး ပါမောက္ခဦးတင့်ဆွေလတ် သုတေသနလုပ်ထားတဲ့ မှတ်တမ်းအရ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူ ၁၀ဝ ဆိုရင် ခြောက်ယောက်က ဆီးချိုရောဂါ ရှိနေတယ်လို့ တွေ့ရကြောင်း သိရပါတယ်။ အများစုက ရောဂါဖြစ်လို့ ဖြစ်နေမှန်း မသိကြပါဘူး။ ဘယ်သူတွေ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ ဖြစ်နိုင်သလဲဆိုရင် မျိုးရိုးရှိတဲ့သူတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဖေ၊ အမေ၊ အဘိုး၊ အဘွားတွေမှာ ဆီးချိုရောဂါရှိရင် ကိုယ့်မှာဖြစ်ဖို့ များပါတယ်။ ဆရာတို့ နယ်တွေကိုသွားတဲ့အခါ လူနာတွေကို “မျိုးရိုးထဲမှာဆီးချိုရှိလား”လို့ မေးလိုက်ရင် “ရှိတယ်၊ ကျွန်မယောကျာ်း”လို့ ပြန်ဖြေတတ်ကြပါတယ်။ ဆီးချိုရောဂါက ဒီလိုနည်းနဲ့တော့ မကူးပါဘူး။
အထူးသဖြင့် မျိုးရိုးရှိတဲ့သူ၊ အဝလွန်တဲ့သူ၊ သွေးတိုးရှိတဲ့သူတွေ စစ်သင့်ပြီး ဘာရောဂါမှ မရှိရင်တောင် အသက် ၄၅ နှစ်ကျော်တာနဲ့ စစ်သင့်နေပါပြီ။ အသက် ၄၅ နှစ်ကျော်လာသူတိုင်းဟာ လက္ခဏာရှိရှိ၊ မရှိရှိ စစ်ဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။ ဆီးချိုသွေးချို ရောဂါရှိသူတချို့မှာ ရေငတ်တာ၊ ဆီးအများကြီး သွားတာ၊ ပိန်ကျသွားတာ၊ ဆီးမှာ ပရွက်ဆိတ်အုံတာ စတဲ့ လက္ခဏာတွေ ရှိတတ်ပေမယ့် ဘာလက္ခဏာမှ မရှိဘဲနဲ့လည်း ဆီးချိုသွေးချို ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆရာတို့ အကြံပြုချင်တာက အသက် ၄၅ နှစ် ကျော်လာသူတိုင်း ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ ရှိ၊ မရှိ စစ်ကြည့်ဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။
အခုနောက်ပိုင်း ဆရာတို့တွေ့လာရတာက အသက် ၁၂ နှစ်အရွယ် ခပ်ဝ၀ကလေးလေးတွေက ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ ဖြစ်နေတာကို တွေ့နေရပါတယ်။ ဒါကို အတော်စိုးရိမ်နေပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကိုယ့်တူ၊ ကိုယ့်သား၊ ကိုယ့်မြေးတွေ ဝနေရင် ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါဖြစ်ဖို့ အခွင့်အလမ်းက အတော်များနေလို့ပါ။ ဒါကြောင့် ကလေးတွေကို ငယ်ငယ်ကတည်းက အချိုရည်တွေ မတိုက်ဘဲ အစားအသောက်ကို ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်အောင် ကျွေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
မေး. ဆီးချိုရောဂါကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့ စားသောက်တဲ့ ပုံစံကို ဘယ်လိုပြုပြင်သင့်ပါသလဲ ဆရာ။
ဖြေ. ဆီးချိုရောဂါကို ကာကွယ်လို့ရပါတယ်။ ကာကွယ်ချင်ရင် C သုံးလုံးကို မှတ်ထားသင့်ပါတယ်။
-Count the calorie
ပေါက်စီတစ်လုံး စားလိုက်တယ်ဆိုရင် ဒီကယ်လိုရီပြန်ကြေဖို့ တစ်ကီလိုမီတာခွဲလောက် လမ်းလျှောက်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။ ဟမ်ဘာဂါတစ်ခု စားလိုက်ရင် ကယ်လိုရီ ၃၀ဝ ရတဲ့အတွက် ဒါကိုပြန်ကြေဖို့ တစ်နာရီတိတိ လမ်းလျှောက်ရပါမယ်။ ဟမ်ဘာဂါတစ်လုံးစားတိုင်း တစ်နာရီ လမ်းလျှောက်ရပါမယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်စားမယ့် အစားအသောက်ရဲ့ ကယ်လိုရီကို သတိထားပါ။
-Choose the diet
ချိုလွန်း၊ ငန်လွန်း၊ အဆီများလွန်းတဲ့ အစားအသောက်တွေကို မစားသင့်ပါဘူး။ ကိုယ်ဘာစားနေသလဲ ဆိုတာ သိဖို့ကောင်းပါတယ်။ ရေဆာရင် ရေပဲသောက်ပါ။ အချိုရည် မသောက်ပါနဲ့။ ဘီယာ မသောက်ပါနဲ့။ အချိုရည်သောက်တာကြောင့် ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ ဖြစ်ဖို့ အားပေးပါတယ်။
ဒီလို စားသောက်နေထိုင်နည်းတွေကို ပုံမှန်လိုက်နာပေးဖို့ လိုပါတယ်။ အရေးကြီးတဲ့ အချက်အနေနဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုများရင်လည်း ဆီးချိုရောဂါဖြစ်ဖို့ အားပေးတဲ့အတွက် တစ်နေ့ကို မိနစ် ၃၀၊ တစ်ပတ်မှာ မိနစ် ၁၅၀ လမ်းလျှောက်ပေးလိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် စိတ်ဖိစီးမှုလည်း လျော့ပါးစေ၊ ကယ်လိုရီအပိုတွေလည်း ကျစေတဲ့အပြင် ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါကို ၃၅-၄၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ လမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာ သတိပြုရမှာကတော့ မောရမယ်၊ ရင်တုန်ရမယ်၊ ချွေးပြန်ရပါမယ်။ ဒါမှ ထိရောက်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
Related Items:Calorie, Diabetes, Diet, Fat, Salty, Sweet, Urine